भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध भएमा भारत टिक्न नसक्ने -रुसी परमाणु विज्ञ
काठमाडौं, ७ जेठ । भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध भएमा भारत टिक्न नसक्ने एक रुसी परमाणु विज्ञले दाबी गरेका छन् । रुसका परमाणु विज्ञ पेत्र तोपीच्कानोभका अनुसार पाकिस्तानी क्षेप्यास्त्रलाई झेल्न सक्ने क्षमता भारतसँग छैन । उनले भने, ‘भारतले आफ्नो रक्षा क्षेत्रको विकासका लागि धेरै लगानी गरेको छ तर पनि उसले अहिलेको अवस्थामा पाकिस्तानी क्षेप्यास्त्रको सामना गर्न […]
६६ यात्रु बोकेको विमान वेपत्ता
काठमाडौं, ६ जेठ । दश चालकदलका सदस्यसहित ६६ यात्रु बोकेको विमान वेपत्ता भएको छ । फ्रान्सको राजधानी पेरिसबाट इजिप्टको कायरोका लागि उडेको इजिप्ट एयरको जहाज सम्पर्कविहिन भएको छ। फ्रान्सको राजधानी पेरिसबाट इजिप्टको कायरोका लागि उडान भरेको इजिप्ट एमएस ८०४ विमान सम्पर्कबिहीन भएको इजिप्ट एयरले जनाएको छ । ‘इजिप्ट एयरका एक अधिकारीका अनुसार एमएस८०४ बिमान स्थानीय […]
आतंकवादको प्रायोजकविरुद्ध मुद्दा हाल्न अमेरिकामा विधेयक पारित
काठमाडौं,५ जेठ । अमेरिकाको माथिल्लो सदन सीनेटले आतंकवादको प्रायोजकविरुद्ध मुद्दा हाल्नसक्ने प्रावधानसहितको विधेयक पारित गरेको छ । विधेयकले कानूनको रुप लिएमा सेप्टेम्बर ११, सन् २००१ को आतंकवादी आक्रमणमा पीडित भएकाले साउदी सरकारबिरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्न सक्ने छन् । आतंकवादको प्रायोजनबिरुद्धको न्यायसम्बन्धी यस विधेयक अब तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटीभमा पठाइने छ । प्रतिनिधिसभाबाट पनि पारित […]
बालबालीकालाई सैन्य तालीम दिदै आईएस
काठमाडौं,४ जेठ । अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) ले धमाधम बालबालिकालाई सैन्य तालिम दिइरहेको छ । आइएसले अत्याधुनिक हतियार चलाउन बालबालिकालाई तालिम दिएरहेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, मलेसिया लगायतका मुलुकबाट लगिएका बालबालिकालाई सिरियामा आइएसले सैन्य तालिम दिएको हो । आइएसले विभिन्न सामाजिक संजालमार्फत बालबालिकालाई आकर्षित गर्दै आएको छ । (एजेन्सी)
शरणार्थी बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पुर्‍याउने वातावरण बनाउन नयाँ रणनीति
काठमाडौँ, ३ जेठ । बालबालिकाको पक्षमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था सेभ द चिल्ड्रेनले शरणार्थी बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पुर्‍याउने वातावरण बनाउन नयाँ रणनीतिसहित सहकार्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अपिल गरेको छ । शरणार्थी बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकारको रक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले थप एकीकृत प्रयास गर्नु पर्नेमा सेभ द चिल्ड्रेनले जोड दिएको छ । सेभ द चिल्ड्रेनले आफ्नो नयाँ प्रतिवेदन […]
सिरियामा सरकारी र आईएस लडाकुबीचको भिडन्तमा ५५ को मृत्यु
काठमाडौं,२ जेठ । सिरियाको डेर अल जौरको अस्पताल परिसर कब्जा गर्न गएका अतिवादी इस्लामिक संगठन आइएस लडाकू र सरकारी सेनाबीचको भिडन्तमा ५५ जना मारिएका छन् । मारिनेमा ३५ जना सरकारी पक्षका र २० जना आईएस लडाकू रहेको जनाइएको छ । घटनामा अस्पतालका केही कर्मचारीलाई आईएस कार्यकर्ताले कब्जामा लिएका छन् । सिरियाको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको अल […]
युरोपमा अमेरिकाद्धारा क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली संचालन
काठमाडौं,३१ वैशाख । अमेरिकाले युरोपेली मुलुक रोमानियामा क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । रोमानियाको राजधानी बुकारेष्टबाट १८० मिलोमिटर दक्षिणस्थित देभेसेलु शहरमा ८० करोड अमेरिकी डलरको लगानीमा क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा शिविर सञ्चालनमा ल्याइएको हो । यो शिविरले रोमानिया र अन्य युरोपियन मुलुकमा बाहिरबाट प्रहार हुने कुनै पनि क्षेप्यास्त्रको प्रतिरोध गर्नेछ । अमेरिकाले युरोपियन राष्ट्रहरुको प्रतिरक्षामा उत्तर […]
इराकमा कारबम बिस्फोटबाट ९३ को मृत्यु
काठमाडौं,३० वैशाख । इराकको राजधानी बग्दादस्थित एक व्यस्त बजारमा भएको कार बम विस्फोटमा कम्तिमा ९३ जनाको मृत्यु भएको छ । विस्फोटमा परी अन्य ८७ जना घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । यो आक्रमण इराकमा पछिल्लो समयमा भएका आक्रमणमध्ये सबैभन्दा ठूलो मानिएको छ । आक्रमणको जिम्मेवारी चरमपन्थी संगठन इस्लामिक […]
७२ बर्षको उमेरमा कुनै महिलाले बच्चा जन्माउला ?
काठमाडौं, २९ वैशाख । ७२ बर्षको उमेरमा कुनै महिलाले बच्चा जन्माउला ? तपाई नपत्याउन सक्नु हुन्छ ।तर यस्तै भएको छ भारतमा । भारतमा एक महिला ७२ वर्षको उमेरमा आमा बनेकी छन् । पञ्जाव राज्यकी ७२ वर्षीया दलजिन्दर कौर गत महिना आमा बनेकी हुन् । उनले आइभिएफ पद्धतिबाट सन्तान जन्माएकी हुन् । मातृत्व सुख प्राप्तिसँगै आफ्नो […]
उत्तर कोरियाली शासक किम जोङ उन वर्कर्स पार्टीको अध्यक्षमा निर्वाचित
काठमाडौं,२८ वैशाख । उत्तर कोरियाली शासक किम जोङ उन वर्कर्स पार्टीको सर्वोच्च पद अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । पार्टीको प्योङयाङमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको सम्मेलन (कंग्रेस) ले ३३ वर्षीय किमलाई पार्टी नेताको वैधानिकता दिएको हो । आइतबार भएको निर्वाचनमा उनी आफ्नो क्षेत्रबाट निर्विरोध निर्वाचित भए । उनको पक्षमा १ सय प्रतिशत मत खसेको थियो । […]